सेक्स खोज्नेमा नेपाल कतिऔं नम्बरमा पर्छ ? यस्तो भन्छ गुगल - Deshko News Deshko News सेक्स खोज्नेमा नेपाल कतिऔं नम्बरमा पर्छ ? यस्तो भन्छ गुगल - Deshko News
सेक्स खोज्नेमा नेपाल कतिऔं नम्बरमा पर्छ ? यस्तो भन्छ गुगल
प्रविधिको तीब्र विकाससंगै अहिले जे चिजबारे जानकारी लिन र विभिन्न किसिमका भिडियोहरु हर्ने कार्य बढ्दैछ । नेपालीहरु पनि उल्लेख्य छन् । यसमा नेपालीहरु सेक्स भिडियो हेर्ने अझ बढी छन् ।
विश्वको नम्बर एक अनलाइन सर्च इञ्जिन गुगलले नेपाल र नेपालीको सेक्स प्रवृत्तिसम्बन्धीको खोजी गरेको हो । विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला, इन्टरनेट युजरहरूको गुगल सर्चका आधारमा सेक्ससम्बन्धी सामग्री खोजी गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा विश्व मै नेपाल दसौं स्थानमा छ।
श्रीलंका, भारत, पपुवा न्युगिनी, इथियोपिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, सोमालियापछि नेपालले उक्त स्थान बनाएको हो। गुगलका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ६४ प्रतिशत नेपालीले सेक्स रिलेटेड कन्टेन्ट (सामग्री) सर्च गर्ने गरेका छन् ।
सेक्स रिलेटेड कन्टेन्ट खोज्ने क्रममा सन् २००९ र सन् २०१० मा नेपाल विश्वभरमै सातौं स्थानमा रहेको गुगलले देखाएको छ।
फ्रि सेक्स, सेक्स भिडियो, सेक्स भिडियोज, सेक्स पोर्न, पोर्न, ट्युब सेक्स, इन्डियन सेक्स, सेक्स हट, सेक्स स्टोरिज, पोर्नो क्रमश धेरै टाइप गरिएका शब्द हुन् भनेर गुगल जानकारी दिन्छ। नेपालीहरू पनि यी शब्द टाइप प्रशस्तै गरेका छन् ।